सबैलाई हँसाउने सुरज भिरखोईरेको भीरमा खिचेको गाइजात्रे भिडियो बन्यो भाइरल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सबैलाई हँसाउने सुरज भिरखोईरेको भीरमा खिचेको गाइजात्रे भिडियो बन्यो भाइरल
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार सुरज भिरखोईरेले यसपटकको गाइजात्रामा भ्रष्ट बिरोधीहरुलाई नेताहरुलाई किरा परोस् भन्दै आफ्नो गाइजात्रा प्रस्तुत गरेका छन्।
जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै नेताहरुले मोज मस्ती गरेकोमा उनले गाइजात्रा मार्फत विरोध जनाएका छन्। नेपाली समाजमा भएको बिकृतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सत्ताधारीहरु नै जनता बिकृति तथा भष्ट्राचारको पक्षमा भएको आरोप लगाएका छन्।
गाइजात्रामा हुने विरोधी भावनाले नेता तथा सत्ताधारीको चेतना खुल्ने विश्वास आम नागरिकले लिएका छन्। नेपालमा यतिका स्वास्थ्य संस्थाहरु भएर पनि सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि नेताहरु विदेशमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको उनले आरोप लगाएका छन्।
(हेर्नुहोस् गाइजात्राका भिडियो)